Ukubuyekezwa kwezifundo zabangakabi neziqu ezigxile Ezifundweni Zesayensi Yezobugebengu kanye Nezophenyonzulu Lwangaphandle Esikolweni Sezifundo Ngenhlalosintu Elandelwayo (SAHS) kwapheleliswa kahle ezinsukwini ezine.
Ukubuyekezwa kwesifundo okugxilwe kuso kuyinqubo yokuqinisekisa izingabunjalo lesikhungo ukuze kuhlolwe yonke imisebenzi ekhona ekuvuselelweni kohlelozifundo, ukuphathwa, kanye nemiphumela yokugxilwe kukho okukhethiwe. ‘Inhloso yokubuyekezwa kwangaphandle kwezingabunjalo ukuhlinzeka izindlela ezihlelekile zokuhlale kuqinisekiswa intuthuko ekuhlinzekeni izinsiza kubasebenzi nabafundi kanye nokwenza okulindelwe ababambiqhaza,’ kusho uthisha wezesayensi yobugebengu, uSolwazi Shanta Balgobind-Singh. ‘Kungukuncoma ukwenza okuhle kanye nokugqamisa izingxenye ezidinga ukuthuthukiswa ukuze kwande izingabunjalo lokufundisa nokufunda.’
Okwakuyingxenye yokubuyekezwa kwakuyimihlangano nezingxoxo nababambiqhaza abahlukahlukene bangaphakathi nabangaphandle kanye nokuvakashela amakhempasi womabili i-Howard kanye ne-Pietermaritzburg, usuku lokugcina lwabekelwa imihlangano yokukhumbula kanye nokuhlanganisa izingxoxo zepheneli.
Itiye lokuzithokozisa labanjelwa eSikoleni ukuze kubongwe abasebenzi abalekelelayo kanye nothisha ngokusebenza ngokubambisana ukuqinisekisa ukuphumelela komsebenzi nokuqedela inqubo yokubuyekezwa.